အောင်မြင်မှုရှိသော်လည်း ဘဝရဲ့ပြည့်စုံမှုနဲ့ ဘာကြောင့် ထပ်တူမကျနေရသလဲ ? - ONE DAILY MEDIA
၁၉၇၀ တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သော What Colour Is Your Parachute? ဆိုတဲ့ ဂန္ဓဝင်စာအုပ်ဟာ လူအများ၏အကျိုးစီးပွားအတွက် သူတို့အရည်အချင်းနှင့်ကိုက်ညီသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်နိုင်ရန်ကူညီပေးခဲ့ပါတယ် ။ ယနေ့မှာ‌တော့ ထိုမေးခွန်းကို ပြီးပြည့်စုံသောဘဝသည် မည်သည့်အရာဖြစ်သနည်း ဟူသောမေးခွန်းနှင့်အစားထိုးနိုင်ပါတယ်။
Parachute စာအုပ်က ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလမ်းကြောင်းတွေကိုစဉ်းစားဖို့ကူညီခဲ့ပေမယ့် ဒီနေ့ခေတ်ကမ္ဘာကြီးကပိုရှုပ်ထွေးပြီး ပိုမြန်လာပါတယ်၊ တစ် ဦး ချင်းစီဟာ သူတို့ရဲ့ဘဝပန်းတိုင်တွေ၊ အစီအစဉ်တွေအကြောင်းစဉ်းစားဖို့လိုသလိုသူတို့ရဲ့ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးလည်း အဲဒါတွေကိုအဆက်မပြတ် ချိန်ညှိနေရပါတယ်။
Metrus Institute မှလေ့လာမှုတစ်ခုတွင် ဖြေဆိုသူတိုင်းက ဘဝကိုပြီးပြည့်စုံပြီး ရေရှည်ပျော်ရွှင်မှုအခြေအနေလိုလားကာ မိမိ၏အရည်အချင်းနှင့်အညီ နေထိုင်လိုကြပါတယ် ။ လူအများစုအတွက်ဤအရာကို “ သင်ဟာ အကုန်ဖြစ်လာနိုင်သည်” ဟုဘာသာပြန်နိုင်ပါတယ် ။ စိတ်ဝင်စားစရာ ကတေယ့ ဖြေဆိုသူငါးပုံ ပုံ လေးပုံ ခန့် ဟာ ပြည့်စုံသည်ဟုမခံစားရသေးခြင်းပါပဲ။
ပို၍ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်မှာဖြေဆိုသူအများစုဟာ တစ်စုံတစ်ခုကို အောင်မြင်လိုကြပါတယ်။ ဥပမာ – စီးပွားရေး၊ အစိုးရလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် စွန့် ဦး တီထွင်လုပ်ငန်းတစ်ခု၊ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများ၊ ချစ်ခင်သူများနှင့်ဆက်ဆံရေး၊ ဘာသာရေးပန်းတိုင် တို့တွင်ဖြစ်ကြပါတယ်။ သို့သော်အနည်းငယ်မျှသာလုံးလုံးလျားလျား ပြည့်စုံသည်ဟုခံစားကြရပါတယ်။
အောင်မြင်သူများနှင့် မအောင်မြင်ကြသေးသူများကြားခွဲခြား ပေးထားသော အဓိအချက် ၅ ချက်ရှိနေပါတယ်။
ပြီးပြည့်စုံတဲ့လူတွေဟာ သူတို့လုပ်သမျှအရာအားလုံးကို စနစ်တကျ စီမံထားသော ဘဝအမြင်၊ ဘဝရည်မှန်းချက်တွေအကြောင်းပြောကြပါတယ်။ အောင်မြင်သော်လည်း မပြည့်စုံသောသူများက ငွေများ၊ ရာထူးများ၊ သို့မဟုတ်သူတို့ထံမှအခြားသူများမျှော်လင့်သောအရာများအကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် Ted သည် ပညာထူးချွန်သောမိသားစုနှငိ့အတူ ဉာဏ်ကောင်း သောကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးဖခင်ဖြစ်သူ၏အောင်မြင်သောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကြောင့် အရိပ်ကောင်းကောင်းရခဲ့ပါတယ် ။ Ted ဟာ ကောင်းမွန်သောဒဿနနှင့်အလယ်ခေတ်အနုပညာများကို ထိပ်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ သင်ယူခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမယ့် သူ့အဖေ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်လောက်တဲ့ ထက်မြက်တဲ့သူတစ်ယောက်လိုအပ်နေတာကြောင့် Ted ကို တာဝန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Ted သည်သူ၏အခန်းကဏ္ဍတွင် အတန်အသင့် အောင်မြင်မှု ရရှိခဲ့သော်လည်းသူ၏အိပ်မက်များကို တော့ မဖြည့်ဆည်းနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
အကြီးမားဆုံးလိုအပ်ချက်များအနက် တစ်ခုမှာဘဝဟန်ချက်ညီမှုဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးပြည့်စုံသောအရာများဟာ သူတို့၏အလုံးစုံဘဝဟန်ချက်ညီရပါတယ် ။အများစုဟာ အလုပ်အကိုင်၊ ဆက်ဆံရေး၊ မိသားစု၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ၀ါသနာပါရာ၊ ဘာသာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဟန်ချက်ညီမှု မရှိဘဲ အလုပ်အပေါ်တဖက်သတ်အာရုံစိုက်ကြပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှသာ လူများစွာက သူတို့၏ဘ ၀ ၌ အခြားအရာများထက် အလုပ်ကိုပိုအလေးထားခဲ့မိသည်ကိုနောင်တရတတ်ကြပါတယ်။
” ငါ့သမီးသုံးယောက်ကြီးပြင်းလာတာကို ငါဂရုမစိုက်မိခဲ့ဘူး။ ဘယ်တော့မှ ပြန်အစားထိုးလို့မရ‌ တော့ဘူး” ဟုဖြေကြားသူတစ် ဦး ကပြောကြားခဲ့သည်။ အခြားတစ် ဦး က “ ကျွန်မခင်ပွန်းရဲ့အလုပ်အတွက် ခြောက်ကြိမ်လောက်ရွှေ့ ပြောင်းခဲ့ပြီး ငါ့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်အကိုင်တိုးတက်ဖို့ကို အခွင့်အလမ်းမရှာခဲ့မိဘူး” ဟုပြောပါတယ်။ကင်ဆာ ရောဂါမှ အသက်ရှင်လွတ်‌မြောက်လာသူတစ် ဦး ကလည်း သူမ၏ဘ၀ကိုလုံးဝပြန်လည်ချိန်ညှိခဲ့ရသည်ဟုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အသက်လုလိုက်ရပြီးတဲ့အခါ သူမဘ ၀ မှာသူတကယ်လိုချင်တဲ့အရာတွေ အတွက်ရှုထောင့်သစ်တစ်ခုကို မြင်တွေ့ခဲ့ရတာပါ။
ယနေ့ကမ္ဘာကြီးတွင် အောင်မြင်မှုနှင့် လိုအင်ဆန္ဒဖြည့်ဆည်းမှုများဟာ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြောင်းလဲနေသော ဘဝအတွက် အရေးပါသောလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်အများသုံးတယ်လီဖုန်းများရဲ့ အသံစနစ်အတွက် အလုပ်စလုပ်တုန်းက မန်နေဂျာတစ်ယောက်က ဒီအလုပ်ဟာ ကမ္ဘာသုံးလိုအပ်ချက်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် ဘဝအတွက် အာမခံချက်ရမယ့်အလုပ်တစ်ခုလို့‌ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ထိုအချိန်ကတော့ မှန်သည်ဟုခံစားခဲ့ရသော်လည်း ယနေ့ခေတ် လူငယ်အများစုဟာ အများသုံးတယ်လီဖုန်းများကိုပင်မမြင်ဖူးကြတော့တဲ့ထိ ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါပြီ။
အပြောင်းအလဲများဟာ နေရာအနှံ့တွင်ရှိပြီး လူများက သူတို့၏ရည်မှန်းချက်နှင့်အိပ်မက်များကို ပြောင်းလဲမှုလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် ပုံဖော်ကြရပါတယ်။ သူတို့ဟာ ခေတ်နှင့်လိုက်လျောညီထွေစွာလုပ်ရပြီး အလုပ်တစ်ခုရပ်တန့်မည့်အချိန် သို့မဟုတ် ဆက်ဆံရေးတစ်ခုပြိုလဲမည့်အချိန်ကိုခန့်မှန်းကြရပါတယ် ။ဤစိန်ခေါ်မှုများကိုရင်ဆိုင်ပါ၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ပါ၊
ရှေ့ဆက်ပါ၊ အနာဂတ်ကိုပြန်လည်ဖန်တီးပါ။ လက်ရှိ မအောင်မြင်တော့သော အောင်မြင်ခဲ့ဖူးသူများဟာ အခြေအနေအရပ်ရပ်နှင့်မလိုက်လျောနိုင်၊ မပြောင်းလဲနိုင်ကြသူများ ဖြစ်ပါတယ်။
(၄) မိမိခန္ဓာကိုယ်ကို မိမိဂရုစိုက်ခြင်း
ကျန်းမာရေးနှင့်ချမ်းသာခြင်းဟာ ပထမဦးစားပေးဖြစ်ပြီး ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများနှင့်အတူ လူများစွာ၏ အဓိကသော့ချက်အရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ လူများစွာဟာ ဘဝအောင်မြင်မှုကြောင့် သူတို့ကိုယ်သူတို့ဂရုစိုက်ဖို့မေ့လျော့ နေကြပါတယ် ၊ သူတို့သည်လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ခြင်း၊ ကျန်းမာစွာမစားခြင်း၊ အလွန်အကျွံအစာရှောင်ခြင်း (သို့) စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်း တို့ကိုစီမံရန်မေ့လျော့နေကြပါတယ်။
ဖြေဆိုသူတစ် ဦး က နေ့တိုင်းဟာ စိတ်ဖိစီးမှုအမြင့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီး ၊ နောက်ဆုံးတွင်ပြိုလဲသွား‌ စေနိုင်သည်အထိပါပဲ ။ သူမ၏ ကံကောင်းခြင်းတစ်ခုက‌တော့ ကိုယ်ဝန်ရလာသည့်အခါမှ အားလပ်ရက်ယူမိတော့မှ နေ့စဉ်ဘဝဟာ သူမအတွက်ကျန်းမာရေး ထိခိုက်စေသောအလေ့အထများ စွာ ရှိနေကြောင်းသုံးသပ်မိပါတော့တယ် ။ လူများစွာအတွက် နှောင်းပိုင်းတွင်နှလုံးထိခိုက်မှုသို့မဟုတ် အလားတူ အန္တရာယ်တစ်ခု ကြုံရနိုင်လောက်တဲ့အထိပဲ ဟုဆိုပါတယ်။
ပြီးပြည့်စုံပြီးသူအများစုဟာ အခြားသူများအား ထောက်ပံ့ကူညိီမှုများ ပြန်ပေးခြင်းပြုလေ့ရှိကြပါတယ်။ လူများစွာဟာ သူတို့၏အလုပ်များမဟုတ်သည့်တိုင် လှုံ့ဆော်မှုများ သို့မဟုတ် လမ်းပြသူများအဖြစ် စေတနာ့ဝန်ထမ်း လုပ်ကြပါတယ်။ အချို့က အကျိုးအမြတ်မယူသောသို့မဟုတ် အခကြေးမယူသော နေရာများတွင် မျှဝေပါတယ် ။ အချို့သူများကလည်း Rosie’s Theatre Kids ကဲ့သို့ သော အဖွဲ့အစည်းများအတွက် စေတနာ့၀န်ထမ်းများ၊ သီချင်းဆိုခြင်း နှင့်ကပွဲများမှတဆင့် အားပေးကူညီမှု ပေးသောအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ပူးပေါင်းခဲ့ပါတယ်။
Rosie ၏စေတနာ့ဝန်ထမ်းအချို့နှင့်စကားပြောကြည့်ပြီးနောက် သူတို့ဟာ အိမ်ခြေမဲ့ကလေးများ ၊ အကြမ်းဖက်သောအိမ်များ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့် အုပ်စုဖွဲ့အကြမ်းဖက်မှုများကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသော ကလေးများ ဖြစ်နေတာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီကလေးတွေရဲ့ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုများ အပြင် သူတို့ထဲက တချို့ကိုစကားပြောပြီးတဲ့နောက် သူတို့ကဘဝမျှော်လင့်ချက်တွေ၊ ဘဝအသစ်တွေနဲ့ အနာဂတ်မှာပြည့်စုံဖို့အခွင့်အလမ်းများအတွက် ယုံကြည်ချက်ရှိနေတာကို တွေ့ခဲ့ရတယ်။
အချိန်ဟာ ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်လောကလုံး သုံးနိုင်‌သောတန်ဖိုးတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့တွင်တစ်နေ့လျှင် ၂၄ နာရီရှိပါတယ် ။ ၎င်းတို့ကိုမည်သို့သုံးစွဲရမည်ကိုရွေးချယ်ရပါမယ်။အချိန်ဖြုန်းနေတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကို အချိန်တိုအတွင်း ပြင်ဆင်နိုင်ရပါမယ်။
-ငါ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေထဲက ဘယ်အရာကငါ့ဘဝကိုပြည့်စုံစေလဲ ??
-ဘယ်ဟာတွေကငါ့ကိုအောင်မြင်မှုရစေပေမယ့် ရေရှည်ခံမှာ မဟုတ်ဘူးလဲ ??
ဤအချက်များပြည့်စုံ အောင်သုံးသပ်ပါ ။ ဒါတွေဟာ သင့်ရဲ့အလုပ်နဲ့ဘ၀ မှာ ပျော်ရွှင်မှု၊ ပင်ကိုယ်အရည်အချင်း နဲ့အတွင်းစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုတိုးဖို့ကူညီနိုင်ပါတယ် ။ သင့်ကိုယ်တိုင်သာမက သင့်ရဲ့ပတ်၀န်းကျင်က လူ တွေကိုလည်း အလားတူ ကူညီပေးပါလိမ့်မယ် ။